izingubo Wezingane - kuba njalo izinga okusezingeni eliphezulu, isiyaluyalu imibala kanye ukusikeka ukhululekile. Nokho, ilungelo ukuthenga ihembe noma ingubo akunakwenzeka njalo. Nakuba kuyafaneleka, abakhiqizi banezeluleko ngokwanele ububanzi. Nokho, izindleko akuhlali kutholakala emindenini abasha. Yingakho omama abaningi ebuya womama ekhaya, funda ukukhilosha izingane. Phela, osezwile, bazokwazi ukwenza izinto ezinhle kakhulu, luzodla kubo ncamashi ezishibhile ngoba abanayo ukuze ukhokhele umsebenzi.
Uma ucela umuntu ukuba acabange ukuthi kuyinto ukukhilosha izingane, "amabhuzu" - impendulo kuzokwenzeka kaningi. Yiqiniso, lezi izicathulo izingane namuhla ithungwe amabhizinisi amaningi. Nokho amabhuzu wenza lendwangu musa ihluke umusa kangaka njengoba knitwear. Nakuba needlewoman ongenalwazi ngisho imodeli kakhulu elula kungase kubonakale kunalokho xaka. Ngakho-ke indlela yabo kule ndawo kufanele kuqale amamodeli we elula amafomu. Kwakuyoba "ukubeka isandla" ukuze umsebenzi wathuthuka ngokushesha kakhulu esikhathini esizayo.
Ukuqala ngobuhlakani bakho nge lula, kufanele siqaphelisise indlela yokwenza ingubo. Ukusebenzisa hook, kungenziwa engahlangene nje kuphela isikwele umkhiqizo openwork noma ukuma unxande ezokwenza sidonse amehlo abanye omama, kodwa futhi ayazika. Lesi sakamuva kuzovumela ingane ufudumele umsebenzi ongaphandle nenkathi ebandayo.
Futhi ufunde Crochet izingane ngokwenza scarves. Kufanele uqale nge imodeli olula umumo elingunxande, okuyinto kuzodinga ukuthi kuphela alternation amakholomu noma ngaphandle sc nomoya izihibe. Lokhu kuyindlela enhle ukuba aqeqeshe in ubuciko ukunitha. Futhi umkhiqizo osuphelile ke qiniseka singaba usizo kabi, uma hhayi ingane, ukuze dolls ngokunembile.
Omama abaningi, ukufunda ukukhilosha izingane, siqale ukudala imikhiqizo eyingqayizivele. Ikakhulukazi uzame labo abesifazane onendodakazi esakhula. Phela, ngale ndlela ungakwazi njalo tie isiketi aluhlaza ngeke akuqede ngesikhathi ukuhlala enwetshiwe enkulisa wengane. Ngisho Intombazane ubumnandi uzame kule nto, uma sifana isitayela yemfashini umsebenzi kwenziwa ngokunembile kakhulu. Ngakho-ke, umama uzodinga qiniseka uzame.
Njengoba kahle ukukhilosha izingane isikimu uzokwazi ukufunda ngaphandle nobunzima kakhulu. Lokhu kuvula ithuba elikhulu ngobuhlakani bakho. Namuhla omunye kalula uthole imodeli ezithakazelisayo, ukudalwa kwendoda okungabangela ubunzima obuthile. Ephambi kwezinduna isikimu ungenayo eyolanda iphethini. Ngo incazelo ungathola njalo ukwakheka Kunconywa kanye ukushuba we ntambo. Uzothola kuphela ukuthenga ntambo futhi, ethatha indawo ukhululekile, baqala ngenalithi. Futhi umphumela nakanjani ukujabulisa, inqobo nje uma kuzoba amaphutha isikimu ukunitha iphethini.
Abesifazane abaningi, kokuba kahle ukukhilosha izingane, ungayeki. Baqala ukwakha imikhiqizo ehlukile ngokwami mina nomyeni wami. Futhi abaningi ngisho obumbene oda.
A kancane mayelana nendlela ukwenza namasongo kudabuke